किसान र उपभोक्ताका लागि मोबाइल एपमै निःशुल्क 'हाट-बजार' || समाचार
किसान र उपभोक्ताका लागि मोबाइल एपमै निःश...
आफ्ना कृषिजन्य उत्पादन नबिकेर चिन्तित हुनुहुन्छ? या कृषि फर्म खोल्न जग्गा, खेती गर्न चाहिने मेसिन खोजिरहनुभएको छ? ताजा फलफूल-तरकारी सस्तोमा कता पाइन्छ भनेर अलमल हुनुहुन्छ कि?
सुजलका अनुसार हाट-बजार एप एन्ड्रोइड र आइओएस दुवै प्लेटफर्ममा उपलब्ध छ र निःशुल्क डाउनलोड गरी चलाउन सकिन्छ। डाउनलोड गरिसकेपछि प्रयोगकर्ताले एपमार्फत् सामान किन्न वा बेच्न परे 'युजर लगइन' गर्नुपर्छ। प्रयोगकर्तालाई सहज होस् भनेर मोबाइल नम्बरबाटै लगइन गर्न मिल्ने बनाइएको सुजलले जनाए। थप बुझ्न यसको वेबसाइट हेर्न सकिन्छ।
यो एपमा किसान र उपभोक्ता मात्रै होइन, व्यापारी पनि जोडिन सक्छन्। 'कुनै किसानको उत्पादन धेरै हुन्छ। उपभोक्ताले किसानका सबै उत्पादन किन्न सक्दैनन्। त्यही भएर व्यापारीलाई पनि हामीले यसमा जोडेका छौं,' उनले भने, 'धेरै परिमाणमा सामान चाहिने व्यापारीले पनि एप्लिकेसनबाट किन्न सक्छन्।'
एपबाट एउटा जिल्लाको सामान अर्को जिल्लामा किनबेच गर्न सम्भव छ त? यसका लागि एपमा प्रदेशअनुसार सामान किन्न तथा बेच्न सकिने सुविधा राखिएको छ। 'अहिले सातै प्रदेशअनुसार मिलाएर राखिएको छ। आफूलाई पायक पर्ने प्रदेशमा सामान किनबेच गर्न सकिन्छ,' सुजलले भने, 'पछि यसलाई स्थानीय तह अनुसार राख्ने योजना बनाएका छौं।'
यो एपमा सामान बेच्न राख्दा पैसा तिर्नु पर्दैन। किसानले निःशुल्क आफ्नो सामानको प्रचार गर्न पाउँछन् भने उपभोक्ताले किन्न सक्छन्। किसानले आफ्ना उत्पादन बजारका हाटमा जसरी बेच्न राख्छन्, त्यसैगरी यो एपमा बिक्रीका लागि राख्न सकिने उनले जनाए।
'किसानले मात्र होइन, उपभोक्ताले पनि आफूलाई आवश्यक सामान सिधै किसान वा बिक्रेतासँग मोल–मोलाइ गरी किन्न सक्छन्,' उनले भने। एपमा किसान तथा बिक्रेताले आफ्नो सामानको मूल्य आफैं तोक्न मिल्ने सुविधा छ। कृषिजन्य उत्पादनको फोटो, मूल्य, पाइने स्थान, सामानका गुण, डेलिभरी सुविधा आदि प्रस्ट खुलाइ प्रचार गर्न सकिने उनले जनाए। 'यसरी किसानले बिक्रीमा राखेका सामान क्रेताले आफूलाई आवश्यक गुणस्तर हेरी मोलमोलाइ गरेर उचित लागे सिधै किसानबाटै लिन सक्छन्,' उनले भने।
त्यस्तै कुन किसानले के सामान बेच्न राख्यो भन्नेबारे पनि सबै एप प्रयोगकर्तालाई नोटिफिकेसन जाने उनले जनाए। यो एपले किसानका सामान छिटो बेच्न मद्दत पुग्ने कम्पनीको विश्वास छ।
हामीले किसानलाई लक्षित गरेर एप ल्याएका हौं। किसान समक्ष पुर्‍याउन स्थानीय तहबाट किसानको विवरण संकलन गरिरहेका छौं,' उनले भने, 'संकलन भइसकेपछि हामी किसानलाई प्रत्यक्ष भेटेर एपबारे बुझाउँछौं।'